Entona | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Manamboatra trano fonenana miainga avy amin'ny biriky izahay amin'ny fanararaotana fitaovana
Matetika ny tompon-tany no te hanamboatra trano fonenana. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny safidin'izy ireo dia mitsahatra amin'ny rafitra iray voarakitra miaraka amin'ny fitaovana fandrakofana. Azo alamina eny amin'ny tany malalaka na ao anaty trano fonenana izany. Ny fitaovana famelabelarana dia mora hosoloana (raha ilaina), ary efa ela ny frame. Azo atao tsy miankina izany.
Fomba hisafidianana fitaovana fandrakofana ny fandriana
Ireo mpitsoa-ponenana matihanina amin'ny sehatra, ary koa ireo mpilatsaka an-tsokosoko amin'ity orinasa ity, dia mety mahafantatra fa sarotra ny mikarakara ny zaridaina. Ny tsimparifary, ny famonoana ny masoandro sy ny aretina isan-karazany dia mamono ampahany betsaka amin'ny vokatra amin'ny hoavy, ka lasa zava-dehibe kokoa ny olana momba ny fiarovana azy. Ohatra, fantatrao ve ny fomba fandrakofana ny fandriana mba hiarovana azy ireo amin'ny fiantraikany ratsy amin'ny tontolo iainana?
Autowatering: ahoana no fomba handaminana ny fanondrahana alikaola
Ny zavamaniry sy ny voninkazo mamirapiratra dia mitaky fikarakarana sy fikarakarana tsy tapaka. Rehefa nandeha ny fotoana, nanjary adidy henjana ny fisotroana tsotra. Mba hahafahana manondraka automatique, tena mazava sy tsotra amin'ny resaka fivoriana sy fandidiana. Tokony handefitra amin'ny karazana fitifirana toy izany ve isika, hevero etsy ambany.
Mifidy sarimihetsika ho an'ny trano fonenana: ny karazam-pandrefesana fimailo sy ny mari-pahaizana
Tsy misy valiny mazava ho an'ny fanontaniana mikasika ny lahatsary izay tsara kokoa ampiasaina ho an'ny trano fonenana - ny karazana tsirairay dia manana ny heriny sy ny fahalemeny. Rehefa manapa-kevitra ny filma hisafidy ho an'ny trano fivoahana trano, maro ireo zaridaina no tarihin'ny vola amin'ny fandefasana fitaovana. Ary ny vidiny, ho setriny, dia miankina amin'ny hoe sarimihetsika maharitra ho an'ny trano fonenana sa tsia, ary amin'ny toetra sy ny toetoetra ara-teknika amin'ny fitaovana.
Fiompiana tranon'aratra: maninona ary ahoana no fomba hiarovan-tena
Mandritra ny vanim-potoan'ny fiovan'ny toetr'andro, ny fanovana ny ririnina ho lanezy sy fohy, ary ny fahavaratra mankany amin'ny fandoroana sy ny arid dia hita mazava. Miharatsy ny vokatra amin'ny hoavy. Noho izany, ny famolavolana ny tambazotran'ny aloka dia fandrosoana vaovao amin'ny famahana ny olana. Fametrahana ireo tamba-jotra ho an'ny trano fonenana Ny mpamokatra trano sy vahiny dia mamokatra karazam-pandaharana marobe matevina amin'ny alàlan'ny masoandro.
Fikarakarana volokano polycarbonate phytophthora
Ny Phytophthora dia teny mampatahotra ho an'ireo mpamboly, mpamboly sy mpamboly. Aretina tena mampidi-doza ny fiantraikany amin'ny zavamaniry sy zavamaniry hafa, toy ny strawberries na cucumbers. Raha ny fitsipika, ny zavamaniry voan'ny aretina dia tsy azo tsaboina, ny hany làlana dia ny handrava azy ireo.
Fanamafisana fanamafisana ny trano fonenana: fanamafisam-peo amin'ny tananao manokana
Raha manana trano fambolena ao amin'ny trano fatoriana fahavaratra ianao, dia miankina amin'ny rivotra mety tsara ny be. Ny ventilation dia mamorona ny fepetra mampiavaka indrindra amin'ny fiainana ho an'ny zavamaniry, manara-maso ny haavo sy ny rivotra. Raha tsy mivezivezy ao amin'ny trano fandraisam-bahiny ny rivotra, dia hihaona hatrany hatrany ny mari-pana.
Ahoana ny fomba hanaovana ny trano fonenana misy tafo fanokafana amin'ny tananao
Maro ny zaridaina mpamboly sy tantsaha no nieritreritra ny hanamboatra trano fonenana ao amin'ny tranokalany. Io fanorenana tsotra io dia hanampy amin'ny famolavolana zana-ketsa any amin'ny faritra mangatsiaka, manangona harona eo amin'ny latabatra mandritra ny taona na, na mivarotra legioma na voankazo izay tsy ampy amin'ny vanim-potoana mangatsiaka. Ny fialan-tsasatra ny vidin'ny varimbazaha vita amin'ny trano fivarotana, ny faniriana hividy azy dia avy eo tsy misy, raha toa ka te hanao ny zava-drehetra ianao ary manana fotoana ampy, dia azonao atao ny manamboatra trano fonenana miaraka amin'ny tafo fitifirana.
Greenhouse "Signat tomato": ny fivorian'ny tanan'izy ireo
Na iza na iza na iza na iza, miaraka amin'ny fambolena legioma, dia mahafantatra fa ny zavamaniry dia manomboka tsara kokoa sy haingana kokoa amin'ny tany voaaro, izay hiarovana azy amin'ny rivotra, havandra, ary ambany. Avy eo, heverintsika fa ny trano fonenana "Signat tomato" avy amin'ny mpamorona ny LLC "Krovstroy" Dedovsk. Ny endriky ny teknika sy ny fitaovana ao amin'ny trano fonenan'ny trano fonenan'ny PVC "Signor Tomato" dia ampiasaina mba hamoronana ny fepetra tena tsara indrindra ho an'ny zavamaniry, izay ahafahana mahazo voly sy zana-ketsa.
Ny fampiasana lamba tsy misy volonkoditra mandrakotra ny trano fonenana ao amin'ny saha
Mba tsy ho very maina ny ezaka rehetra napetrak'izy ireo amin'ny fijinjana amin'ny ho avy, maro ireo mponin'ny fahavaratra sy tantsaha no mikaroka fitaovana hananganana mikroklima tsara indrindra. Matetika, ny fitaovana fanarona isan-karazany dia ampiasaina ho an'ity tanjona ity, izay noforonina manokana ho an'ireny tanjona ireny. Amin'ny fanampian'izy ireo, hisy ny fampiroboroboana ny zavamaniry, izay hitarika amin'ny fijinjana be dia be.
Ahoana no hanaovana biriky ho an'ny tanimboly amin'ny tananao manokana?
Ankehitriny, maro ny zaridaina sy zaridaina no resy lahatra fa mahasoa sy mahasoa ny fampiasana trano fonenana. Ny fambolena voajanahary ao amin'ny trano fambolena bitika dia mampiseho vokatra tsara amin'ny fikajiana, mitombo ary mihatsara kokoa. Ankoatr'izany, ireo zavamaniry dia tsara kokoa ny famolavolana ny endriky ny tany, izay mihamafy. Amin'ity lahatsoratra ity dia hifanakalo hevitra momba ny arika izay manorina ny fotodrafitrasa: inona ny fitaovana azo ampiasaina sy ny fomba hananganana tanimboly kely avy amin'ny zavatra aty.
A greenhouse tsy manelingelina: fomba fanaovana fanorenana filma, bao sy hazo
Ny fomba hambolena sy ny fijinjana vokatra be dia be ao amin'ny tranokalanao ary manamboatra trano fonenana ho an'ny kôkômbra amin'ny tananao manokana - azonao vakiana ato amin'ity lahatsoratra ity, izay ahitana sarin'ireo safidy maro samihafa koa dia aseho ho mazava (ohatra ho an'ny mpandray anjara). Fepetra takiana amin'ny zana-kazo ho an'ny cucumbers Mba handaminana ny asanao amin'ny dingana sy famokarana herinaratra amin'ny tananao amin'ny alàlan'ny fitaovam-pako, dia mila mianatra ny fepetra rehetra tokony hikorontana amin'ny ho avy ianao aloha: Fampiroboroboana ny hafanana.
Ahoana no fomba anaovana trano fambolena mifanaraka amin'ny Mitlayder: famolavolana, sary, kisary
Noho ny fampiharana azy dia nahazo ny fankatoavana avy amin'ny mpamboly legioma maromaro ny greenhouse araka ny filazan'i Mitlayder ary mbola manao izany hatrany. Noforonin'ny manam-pahaizana Amerikanina fanta-daza ao amin'ny indostrian'ny legioma ny anaran'ilay serivisy taorian'ny namoronana azy. Nandritra ny taona maromaro, i Meatlider dia nanao fikarohana lalina momba ny fizotran'ny fambolena.
Famokarana tsy miankina amin'ny tanimboly "Breadbox" amin'ny tanany manokana
Misy karazam-pandrefesana isan-karazany. Iray amin'ny karazana trano fonenana finday - trano famokarana "Breadbox". Andeha hojerentsika ny fomba hanamboarana "Breadbasket" fonenana amin'ny tananao manokana, miaraka amin'ny fanampian'ny sary, ary koa hahitana ny tombony sy ny tsy fahampian-tsakafon'ity karazana greenhouse ity. Famaritana sy endri-javatra "Breadbox" - trano fambolena, izay ampiasaina amin'ny fambolena zana-ketsa, fambolena fary ary fanongonam-bolo.
Karazana fametrahana "lolo" maitso ao amin'ny tranokala
Isaky ny lohataona dia nisy fotoana iray farafahakeliny no nieritreritra ny hividy trano fambolena iray na hanaovana azy io. Ny "lolo" maitso vita amin'ny polycarbonate dia malaza androany. Ao amin'ny lahatsorantsika dia hamaritra ny fomba hametrahana ity rafitra ity tsy miankina, hevero ny tombony sy ny tsy fahampiana. Famaritana sy fitaovana Ny endrika tadiavintsika dia mitovy amin'ny lolo, izany no antony nahazoany anarana.
Ny endri-javatra sy ny toetran'ny indostrian'ny indostria
Ny trano fonenana indostrialy dia antsoina hoe zaridaina rakotra, izany hoe trano lehibe iray natao hanomezana ny fepetra ilaina amin'ny famokarana zavamaniry. Zava-bita sy endri-javatra Mampiasà trano fonenana indostrialy ao amin'ny toeram-pambolena mba hampitomboana ny vokatra samihafa sy ny vokatra mitovy amin'izany amin'ny vanim-potoana izay tsy afaka mitombo amin'ny saha na zaridaina.
Karazana fametrahana sy fampiasana "box box" ao amin'ny tranokala
Ny "mofo mofomamy" izay mahazo ny lazany dia trano fambolena, izay manavaka ny halehibeny, ny fandaminana maivana, ary ny fanamorana ny fametrahana azy. Afaka manangona izany ianao raha manaraka torolalana tsotra. Famaritana sy fitaovana Greenhouse dia manana habe kely ary natao mba hampitomboina amin'ny dingana voalohan'ny zana-ketsa, ny ahi-maitso ary ny fambolena.
Ahoana no fomba anaovana lolo fary
Matetika ny mpamboly dia miatrika ny ilana haniry zavamaniry ao amina trano fisotroana na trano fonenana. Tsy dia tsara loatra ny tranobe lehibe, ka manoro hevitra ny hahafantarana ny fomba fanaovana ny trano fonenan'ny lolo amin'ny tananao ary hampitombo ny sary sokiny. Famaritana sy endriky ny endriky ny endriky ny rafitra dia mitovy amin'ny lolo, izay nanely ny elany.
Ny endriky ny fivoriambe sy ny fikarakarana ny "Green Nurse"
Greenhouse "Girl Nurse smartphones" no safidy malaza indrindra amin'ny famokarana serivisy famokarana serivisy manana rafitra fanelezana. Ny mpamboly tsirairay dia afaka resy lahatra amin'ny tombontsoa avy amin'io rafitra io amin'ny fametrahana ilay "mpanampy" ao amin'ny teti-dratsiny manokana. Ny toetra mampiavaka ny trano fandraisam-bahiny, ny safidy toerana ho an'ny fametrahana, torolalana amin'ny fametrahana antsipiriany, fitsipika mifehy - ireo rehetra ireo dia ho hitanao ato amin'ity famerenana ity.
Ahoana ny fampiharana ny iodine hiady amin'ny fahantrana lava ao amin'ny trano fonenana
Ny jody ao amin'ny kitapo voalohany dia tsy ilainao ho anao ihany, fa mety ho tonga zava-mahadomelina tena ilaina ho an'ny zaridainao. Ampiasaina amin'ny fiompiana fitiliana sy ny aretina hafa, ary koa ny sakafo. Aleo hiresaka momba ny tombotsoany amin'ny tranokalanao sy ny fampiasana azy amin'ny ady atao amin'ny vava ratsy. Hazo manan-trano ao amin'ny saha
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Entona